Shir Lagaga Hadlayo Arrimaha Soomaaliya Oo Maanta Ka Furmaya Magaalada Brussels – somalilandtoday.com
Shir Lagaga Hadlayo Arrimaha Soomaaliya Oo Maanta Ka Furmaya Magaalada Brussels
(SLT-Brussels)-Shirka Iskaashiga Soomaaliya ee u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo Beesha Caalamka ayaa maanta si rasmi uga furmi doona magaalada Brussels ee dalka Begium, iyadoo looga hadlayo mustaqbalka Soomaaliya iyo horumaradii la gaadhay.
Shirkan ayaa waxaa si wadajir u shir guddoominaya Madaxweynaha Soomaaliya, Madaxa Midowga Yurub iyo Wasiirka Arrimaha Dibadda Sweden.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in shirka diiradda lagu saarayo wixii u qabsoomay dowladda Soomaaliya, qorshayaasha amniga iyo sidii Ciidamada Soomaaliya ugala wareegi lahaayeen amniga, qorshaha siyaasadda loo dhan yahay sidii dalka uga dhici laheyd doorasho qof iyo cod, dib u eegista iyo dhameystirka dastuurka iyo arrimaha dhaqaalaha.
Waxaa shirka ka qeyb galaya Madaxda maamul goboleedyada, xubno ka tirsan Golaha Wasiirada Soomaaliya, ururada Bulshada rayidka iyo wakiilada Beesha Caalamka.
Dowladda Soomaaliya ayaa dooneyso in si toos ah dhaqaalaha ku baxa mashaariicda horumarineed iyo mida amniga Soomaaliya loogu soo wareejiyo, halka markii hore loo marsiin jiray hey’adaha qaramada midoobey iyo AMISOM.
Shirkan ayaa daba socda shirarkii horay uga dhacay Muqdisho, London iyo kuwa kale oo horay loo qabtay, kaasoo dad badan ay aaminsan yihiin in aanay wax natiijo ah ka soo bixin, taageero horay loogu balan-qaaday Soomaaliya aanu weli la fulin.